musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Yakakura Kwazvo Airport Terminal MuTibet Inotanga Kushanda
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chiteshi chitsva chinobatsira nhandare kuti isangane nechinangwa chekubata vatakuri vemamirioni mapfumbamwe uye matani makumi masere ezvekutakura nekutumira na9, sekureva kwendege.
Kubva pakupera kwegore ra2012, China iri kuwedzera hupfumi hwayo muTibet.
Dunhu rakaparura huwandu hwemigwagwa yemhepo zana nemakumi matatu, nemaguta makumi matanhatu nenomwe akabatanidzwa nendege.
Lhasa Gonggar Airport ndiyo nhandare huru muTibet.
Yakakura kwazvo nhandare yendege kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina Tibet Autonomous Dunhu yatanga kushanda nhasi, mushure memakore anopfuura matatu ekuvaka.
Nzvimbo Yakakura Kupfuura Nhandare yeTibet Inotanga Kushanda
Iyo nyowani nyowani yeLhasa Gonggar Airport inotaridzika seruva rejusi kubva kumusoro. Ichabatsira iyo nhandare kusangana nechinangwa chekubata vanosvika mamirioni mapfumbamwe uye matani makumi masere ezvekutakura nekutumira na9, sekureva kwendege.
Inowanikwa muGonggar County yeShannan City uye padyo neguta redunhu reLhasa, Lhasa Gonggar Airport ndiyo nhandare hombe muTibet.
Kubva pakupera kwegore ra2012, China iri kuwedzera hupfumi hwayo muTibet. Dunhu rakaparura huwandu hwemigwagwa yemhepo zana nemakumi matatu, nemaguta makumi matanhatu nenomwe akabatanidzwa nendege. Huwandu hwenzendo dzevapfuuri dzakaitwa kuburikidza nenhandare idzi dzakasvika mamiriyoni 130 muna 61.